Zụrụ 11-Ketotestosterone ntụ ntụ (564-35-2) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Testosterone ntụ ntụ / 11-Ketotestosterone ntụ ntụ
SKU: 564-35-2. Categories: Testosterone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke 11-Ketostosterone ntụ (564-35-2), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
11-Ketotestosterone ntụ ntụ yiri nke yiri hormonone testosterone kama ọ bụ ihe na-emekarị dị ka isi na androgen na azụ. A na-ekesa ya n'ozuzu ya na ala anụ ọhịa na nkwado nri. Ọ naghị agbanwe agbanwe ma ọ bụrụ na ọ nwere ọrụ anabolic nwere ike ....
11-Ketotestosterone ntụ ntụ isi agwa
aha: 11-Ketotestosterone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C19H26O3
11-Ketotestosterone ntụ ntụ na usoro ọgwụgwọ ọrịa cancer
Aha aha: 11-Ketotestosterone ntụ ntụ
Aha njirimara: 11-Ketotestosterone ntụ ntụ zụrụ, 564-35-2
11-Ketotestosterone ntụ ntụ Usage
11-Ketostosterone ntụ ntụ (CAS 564-35-2) na-arụ ọrụ n'ihu abụọ dị iche iche n'otu oge na abụba na-emepụta nsogbu na-edozi ahụ ma na-eme ka ahụ ghọọ ihe a na-ahụkebe. Ọ bụ ihe a na-emekarị nke anabolic na-egosi na ọ bụ mmadụ dị ka metabolite nke hormones adrenal na bụkwa isi na androgen na azụ nke na-eme ka ọ dị na nri. Ọ na-arụsi ọrụ ike n'enweghị ntughari, ọ gaghị enwe ike ịnweta aromatization, yana ike dị ka testosterone, ọ na-eme ka androgen receptor rụọ ọrụ. Ọ na-ebelata ọkwa cortisol na abụba na imeju n'ihi na ọ bụ onye na-eme ihe ike ma na-ahọpụta ihe mmezi nke 11β-HSD1. A na-ejikọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke cortisols na akpụkpọ anụ ahụ na ọtụtụ mgbaàmà nke ọrịa metabolic, dị ka mmepụtawanye glucose hepatic, nkwalite adipocyte, oke ibu, na iguzogide insulin. Ọ na-enye aka na nbibi ọnwụ ma na-enye aka na ụfụ abụba mgbe ọ na-enwe ike na ahụ ike. Okwesiri ka onye nnoo "recomp" maka oke ihe na abuba na ume na ike inweta ya. Nke a zuru oke maka ma ndi nmalite na ndi nwere ahuhu na ahuhu ndi kachasi mma maka igbutu osisi. KT-11 nwere ike inye aka gbakwunye na ụzụ ọhụrụ ma wepụ abụba ndị na-eme ngwa ngwa na-eme ka ahụ ike na-acha anya zuru oke.
Otú 11-Ketotestosterone ntụ ntụ si arụ ọrụ
11-Ketotestosterone ntụ ntụ dị ka ike na-emepụta etrogen bụ nke ụmụ nwoke na-azụ na mgbakwunye na testosterone. N'ime nnwale gara aga, otu nwa obere nwa Afrika (Clarias gariepinus) gosiri na ọ bụghị testosterone kama 11-Ketotestosterone ntụ ntụ kpaliri spermatogenesis. N'aka nke ọzọ, Testosterone mere ka ọganihu nke pititaryọm gonadotroph mepere.
Ihe omuma nke 11-Ketotestosterone powder's synthesis still unknown for human. Ngosipụta nke mmepụta na Njirimara pụọ ​​na 11-Ketotestosterone ntụ ntụ n'ime ụmụ mmadụ bụ isi ihe ọmụmụ a. A na-enyocha ụmụ mmadụ maka okwu nke P450 na 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase ụdị 1 na 2 bụ ndị bụ isi enzymes gụnyere njikọ nke 11-Ketotestosterone ntụ ntụ. E mere nchọpụta nke 11-Ketotestosterone ntụ ntụ na sel Leydig. Site na ụmụ 10 na ụmụ 10 nke afọ ịmụ nwa, atụle plasma nke testosterone. A na-eji sel nke MCF-7 nweta ọrịa ara ehi na nyocha nke ihe onwunwe ya. Nsonaazụ ikpeazụ gosiri na 11-Ketotestosterone ntụ ntụ na-emepụta n'ọkụ na ọ na-anọchite anya isi androgen n'ime ụmụ mmadụ ma nwee ike ije ozi dị ka onye na-eme ka a na-enweta ya na androgen.
Nnyocha ọzọ gosipụtara na ọkwa ndị dị elu na 11beta-HSD1 okwu na-ejikọta ike ike dị ala karịa ndị okenye. 11-Ketotestosterone ntụ ntụ bụ onye na-emechi ihe nke 11beta-HSD1, 11-KT nwere ike igbochi ma ọ bụ gbanwee ọnwụ nke ike ike. Nsonaazụ gosiri na site n'iji 11-KT mee ihe, ndị na-eme agadi nwere ike ịnọgide na-enwe ike ma ọ bụ nwetaghachị ike n'ihi mgbanwe mgbanwe metabolic afọ.
Uru nke 11-Ketotestosterone ntụ ntụ
Ngwurugwu a mara maka ezigbo ihe onwunwe na-efu. Nke a zuru oke maka mmalite ma ndị ahụ nwere ahụmahụ karị na-arụ ọrụ ahụ ma na-elekwa anya kachasị mma n'ibipụta usoro ntụrụndụ. Ngwurugwu a kachasị mma maka ndị chọrọ idafu abụba ma nweta ume. 11-Ketotestosterone ntụ ntụ pụkwara inyere ndị ahụ na-ahụ ozu aka tinye ụdọ uru ma bụrụ ọdịdị kacha mma ha nwere ike ịbụ.
11-Keto-Testosterone abụghị ezigbo steroid nke nwere onwe ya ma ọ nwere ike ime ka mma gbakwunye na mgbanwụ ebe onye ọ bụla ga-efu mmanụ ma belata cortisol. ihe nchịkọta nke na-enyere aka n'ozuzu nke uka site na usoro nke usoro steroid ndị ọzọ. Ụdị okwu ọnụ kwesịrị ịbụ 200-300mg mgbe transdermal ga-abụ ihe dị ka ọkara nke kwa ụbọchị. N'ikuku, ọ ga-ejikọta ya na ester ma jiri ya na 400mg kwa izu tinyere ndị ọzọ na-egbu ndị na-eme ka ahụ dị ka Anavar ma ọ bụ Masteron.
Ụdị nke 11-Ketotestosterone ntụ ntụ (CAS 564-35-2)
Ngwongwo a nwere ike inwe onwe ya kama o nwekwara ike ime ka o gbakwunye oke ohia nke mmadu choro idaba abuba na belata cortisol. Na mba ụfọdụ ebe a na-ewere ya dị ka iwu, ọ bụ ezigbo ihe nchịkọta ihe nke na-enyere mkpokọta nke ikuku ahụ aka site n'usoro ọkọlọtọ nke ndị ọzọ steroid. Maka ọnụ, ụdị ọgwụgwọ kwesịrị ịbụ 200-300 mg n'oge ọkara nke a maka transdermal kwa ụbọchị. Maka ojiji nke injectable, ọ kachasị mma na ester maka usoro ọgwụ nke 400 mg n'izu ya na ndị ọzọ steroid, Anavar ma ọ bụ Masteron dịka ọmụmaatụ.
Mmetụta dị ike nke 11-Ketotestosterone ntụ ntụ
Ebe ọ bụ na ọ bụ metabolite nke testosterone, 11-Ketotestosterone ntụ ntụ dị nnọọ metabolically eguzogide ọgwụ. O nweghị ike ịbanye n'ime estrogen ma ọ bụ DHT. O nwere mmetụta dị oke oke mmetụta nke na - eme ka ọ dị mma maka ndị na - enweghị mmetụta ndị na - agụnye ntutu isi na nsogbu nke estrogenic. Ọ bụghịkwa nke na-eme ka ọ bụrụ methylated bụ nke mere na ọ dịghị akpata nsogbu imeju ma ọ bụ injected ma ọ bụ na usoro okwu nke oriri. 11-Ketotestosterone ntụ ntụ nwere nnọọ mfe ijikwa njirimara profaịlụ n'akụkụ, mee ka ọ bụrụ otu n'ime steroid kasị dịrị nchebe nke mmadụ nwere ike iji.
11-Ketotestosterone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta 11-Ketotestosterone ntụ ntụ si AASraw
11-Ketotestosterone ntụ ntụ Ezi ntụziaka
1 nyochaa maka 11-Ketotestosterone ntụ ntụ
11-Ketotestosterone ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi